Qorsheynta Maaliyadeed - Million Marayaal
Shakhsiyaadka & Ganacsiyada Yaryar
Waxaan u bixinaa xalka iyo talooyin gaar ah shaqsiyaadka / Qoysaska / Ganacsiyada Yaryar ..
Barnaamijka Socdaalka Maalgashadayaasha
Socdaalku waa ganacsigayaga ugu muhiimsan. Tan macnaheedu waa macaamiisheena inay la shaqeeyaan xirfadlayaal sharci oo khibrad leh. Tallaabo Talaabo Qaadis ah ayaa marwalba la raacayaa.
Liisaska Furan iyo adeegga loo diyaarshay. Iibsashada ama iibinta ama kireynta guri / guri / xafiis / dukaan / meherad / dhul beereed / hudheel / hostel.
Dhismaha shirkadda, Xafiiska Virtual, Xawaaladaha dibedda ka socda, Diiwaangelinta Ganacsiga, xalka HR loo habeeyay dhammaantood hal meel.
Maalgelinta qalabkaaga ayaa kuu oggolaaneysa inaad keydiso lacagtaada oo loogu talagalay baahiyaha kale ee ganacsi. Adeegso shabakadeena adag iyo waayo-aragnimada.
Ka shaqeynta Xalka Caasimadda
Dhammaantood way fududaadeen: Maalgalinta Xisaabaadka ee La Qaado, Xaqiijinta Dhismaha Dhismaha, Maalgelinta Ganacsiga.
Furitaanka koontada bangiga ayaa fududaysay meelkasta oo Dunida ka jirta. Shirkadeena gebi ahaanba waxay ka soo horjeeddaa Lacag La'aanta, Ganacsiga Maandooriyaha iyo Ka ganacsiga Dadka, sidaa darteed, Ma taageerno macaamiisha noocaas ah.
Maalgelinta iyo Xisaabaadka Dibedda
Adeegyada lagu qiimeeyo, waxay kuu oggolaaneysaa inaad diiradda saarto kartidaada aasaasiga ah. Ku fiican ganacsiga iyo ururada cusub ee ka bilaabaya Xukuno cusub.
Xirmooyinka Lacagta & Shaqada
Xitaa kuwa xirfadlayaasha ugu khibradda badan iyo khibrada leh ee ay helaan, mushaharka ayaa noqon kara madax xanuun. Waa goob takhasus u leh, markaa aqoonyahannada ha u xilsaartaan.
Waxaan ka caawineynaa ganacsatada inay u istcimaalaan faa'iidooyinka una helaan ganacsigooda oo dhan.
Qiimaynta ganacsigu waa mid sii kordheysa oo muhiim u ah qorsheynta maaliyadeed ee waaweyn, canshuurta, warbixinta, isu-geynta iyo helitaanka, iwm.
La-talin iyo U-hoggaansan
Dhaqdhaqaaqa xuduudaha xuduudaha ayaa si weyn muhiim u ah howlaha ganacsiga adduunka oo dhan. Khabiirkeenna waxay u fududeeyaan macaamiisheenna.
Hal adeeg oo loogu talagalay dhammaan arrimaha Sharciga, GARGAARKA. Waxaan leenahay heshiisyo shirkadeed heer heersare ah oo laga wada xaajoodo Garyaqaannada, Shirkadaha Sharciga iyo Ururada.
Fursadaha Ganacsiga Caalamiga ah